Ciidamada Jubbaland oo la wareegay gacanta ku haynta Kismaayo iyo shacabka oo dib u soo baxay. – Radio Daljir
Juunyo 30, 2013 6:59 b 0
Kismaayo, 30 June 2013- Xaalada magaalada Kismaayo ayaa degan saddex maalmood oo dagaal culus ka socday kadib, waxaana haatan si buuxda magaalada gacanta ugu dhigay ciidamada maamulka Jubbaland kuwaasi oo dagaal kula jiray dhinacyo kale oo iyana sheeganayey in ay yihiin madaxda Jubbaland.
Dagaalka dhinacyada is haya ayaa magaalada ka socday maanta gelinkii hore waxaana dadku ay saddex maalmood ku jireen guryahooda iyadoo uusan jirin dhaq dhaaq fiican oo dhinaca ganacsiga iyo bulshad aah, waxaa jira khasaare fara badan oo dadka rayid ah soo gaaray.
Xiriiro ay Radio Daljir la samaysay dhinacyada Kismaayo isku haya ayeysan suurta gelin, balse waxaa ilo xog xogaal ah oo ku sugan gudaha magaalada ay sheegeen in ay magaaladu degan tahay oo ay dadku ka soo bexeen guryaha iyagoo hubinaya khasaaraha dhisme ee dagaalku geystay.
Ciidamadii ka soo horjeedey Jubbaland ee ay horkacayeen Col, Barre Aadan shire iyo Iftin Baasto ayaa ka baxay magaalada kadib culays ciidan oo ka soo wajahay dhinaca kale, waxaana haatan la sheegay in ay ku sugan yihiin deegaano buuralay ah oo galbeedka ka xiga Kismaayo.
Waxaa la sheegayaa in ay dhinteen dad ku dhow 45 ruux oo rasaastu haleeshay iyo kuwa kale oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamay in kastoo aan cadad rasmi ah la hayn balse waxaa jira Tobbanaan ruux oo lagu dabiibayo Cisbitalka magaalada xeebta ah kaasi oo aan haysan adeegyo wanaagsan oo dhinaca caafimaadka ah, mar kasta waxaa la filan karaa rogaal celis dagaal xaalada ay haatan ku sugan tahay Kismaayo.
Puntland oo fasaxday shaqaalaha, iyo Qaban-qaabada xuska 1 luulyo oo ka socota Garoowe iyo Muqdisho.